चालीस-पहिले राष्ट्रपति जर्ज एच डब्ल्यू
संयुक्त राज्य अमेरिका को 41 वें राष्ट्रपति
यहाँ जर्ज एचडब्ल्यू बुशको लागि द्रुत तथ्यहरूको द्रुत सूची हो। अधिक गहन जानकारीको लागि, तपाईं जर्ज एच डब्ल्यू बुश जीवनी पनि पढ्न सक्नुहुन्छ।
जून 12, 1924
जनवरी 20, 1988 - जनवरी 20, 1 99 3
सर्वेक्षण गरिएका सर्तहरूको संख्या
जर्ज एचडब्ल्यू बुश उद्धरण
"अपीलेशन काम गर्दैन। 1930 को दशक मा मामला को रूप मा, हामी सद्दाम हुसैन को रूप मा देख रहे हो एक आक्रामक तानाशाही आफ्नो पड़ोसियों को धमकी दिछन।"
"मलाई लाग्छ कि 24-घण्टाको समाचार चक्रले पार्टीहरूको बीचमा भिन्नता बढाएको छ। तपाइँ सधैँ टिभीमा कसैलाई केहि चीज लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यो 20 वर्ष पहिले भएको थिएन। "
"मलाई ब्रोकोली मनपर्दैन। र म सानो बच्चा भएको हुनाले मैले मनपराएका छैनन र मेरी आमाले मलाई खाए। र म संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति हुँ र म कुनै थप ब्रोकोली खाने छैनु। "
थप जर्ज एच डब्ल्यू बुश उद्धरण
प्रेसीडेंसी भन्दा अगाडि क्यारियर
उनले 18 वर्षको उमेरमा द्वितीय विश्वयुद्धमा सूचीबद्ध गरे र समयको सबैभन्दा कम हिमवीर बने।
येल विश्वविद्यालयबाट स्नातक भएपछि, उनी टेक्सास गए अनि आफ्नै आफ्नै तेल कम्पनी स्थापना गरे र 40 वर्षको उमेरमा एक करोडपति बने।
उहाँ टेक्सास '7 औं जिल्लामा 1967-19 71 बाट अमेरिकी कांग्रेसका थिए।
यसको अतिरिक्त, 1980 मा राष्ट्रपति को लागी दौडने देखि पहिले संयुक्त राष्ट्र राजदूत र केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी को निदेशक थियो।
प्रमुख घटनाक्रम अफिसमा
पानामा (1980) को आक्रमण - कोडेडिस सञ्चालन बस कारण सामान्य र आकांक्षा म्यानुएल नोइगागा को कार्यहरु संग निरन्तर असफलता को परिणाम थियो। उनको पक्षले चुनाव गुमायो तर तल हटाउन इन्कार गर्यो। नहर क्षेत्र मा संयुक्त राज्य अमेरिका को रुचिहरु र नॉरिगा को सोवियत यूनियन को स्थानांतरित करने को कारण यूएस अमेरिका को छोड दिए र उसलाई गिरफ्तार गर्यो।
बचत र ऋण बैेलो (198 9) - कहिलेकाहीं महान डिप्रेशनबाट खराब वित्तीय संकट मानिन्छ।
अलास्का (1988) मा एक्क्सन वाल्डेड तेल फैल - तेल ट्यानरले मार्च 23 मा प्रिन्स विलियम स्वरमा ब्लाइफ रीफलाई मारे र त्यसपछि 10.8 मिलियन गैलन तेल गुमाए। आपदालाई एक ढिलो आन्तरिक प्रतिक्रियाले अझ बढी जटिल बनायो र समुद्र तटको 1300 माइल प्रभावित भयो।
अमेरिकन विकलांगता अधिनियम (1 999) - एक सिविल अधिकार कानून 1964 को नागरिक अधिकार अधिनियम को रूप मा समान समान सुरक्षा प्रदान गर्न को लागी अक्षम विकलांगहरुलाई।
सोभियत युनियनको विघटन (1 999)
फारसी खाडी युद्ध (1 999- 1987) - सद्दाम हुसैनको इराकका सेनाहरूले 1 990अगस्टमा कुवैतलाई आक्रमण र कब्जा गरे। मिश्र र सऊदी अरब जस्ता अन्य मध्य पूर्वी राज्यहरू खतरनाक भए र अमेरिका र अन्य सहयोगीहरूलाई सहयोग गर्न बोलाइयो। जनवरीदेखि फेब्रुअरी 1 99 1 सम्म एक अमेरिकी नेतृत्वको गठितले कुवैतमा इराक सेनालाई लडाई र पराजित गर्यो।
जर्ज एचडब्ल्यू बुश कार्यालय छोडेर पछि सक्रिय मानवअधिकार रहेको छ। उनले अक्सर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन संग काम गरे जो 1992 मा उनलाई राष्ट्रपति पद को लागि पराजित गरे।
राज्यमा संघ प्रवेश गर्दा कार्यालयमा
यो सूचनात्मक चार्टले राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उनको कार्यालयका सर्तहरू र उनीहरूको राजनीतिक दलहरूमा छिटो सन्दर्भ जानकारी दिन्छ।
19औं शताब्दी को पांच सर्वश्रेष्ठ पुरातन ठेगाना
संयुक्त राज्यको पहिलो देवताहरू
जेम्स मैडिसन: महत्त्वपूर्ण तथ्य र संक्षिप्त जीवनी
जेम्स बुकानन: महत्त्वपूर्ण तथ्य र संक्षिप्त जीवनी
अनौपचारिक समानुपातिक त्रासदीहरू उछिन्
बच्चाहरु को लागि शीर्ष 10 क्रिसमस चलचित्र
'जी वैस': यो गल्ती फ्रान्सेलीमा नगर्नुहोस्
कसरी फ्रान्सेलीमा "रिज्रेटर" (रिज्रेट गर्न) कन्जगेट गर्नुहोस्
चिकित्सा रेजिडेंसी र प्रशिक्षणको बारेमा तपाईलाई थाहा छ
डरावनी चलचित्र रिमिक्स राउन्ड अप
मार्क ट्वेन उद्धरणहरू जसले तपाईंलाई भाषा छोडिदिनेछ
ड्यान वेस्सन मोडेल 44 म्याग्नम डबल एक्शन रिवोलभर ह्यान्डगन समीक्षा
आवश्यक छ यदि तपाईं 'हो Hobbit'
Gemini र Cancer Love Compatibility
एटा क्यारेनको अनावश्यक भविष्य
विद्यार्थी शिक्षकहरूको लागि शीर्ष सुझाव
एन - एन के के मतलब छ?
बुद्धिमानी मित्र कसरी छनौट गर्ने?
लाइटबल्बको आविष्कार: एक टाइमलाइन
तपाईंको पर्दामा पाठ वा फन्ट साइज ठूलो वा सानो बनाउनुहोस्
ग्राहक सेवा - शिकायतहरूको साथ व्यवहार